I-B737 300-400-500 (multipack Rikoooo) inkinga yokukhuphuka
Umbuzo I-B737 300-400-500 (multipack Rikoooo) inkinga yokukhuphuka
unyaka 1 11 edlule #917 by CL38
On P3DI-v4 nge-B737-400 noma i-B737-500 (i-classic multipack Rikoooo) indiza (ngemuva kokuqalisa ukusebenza kwe-PA, SPEED = 250, ALT = 10000, A / T engage, V / S = 1800 noma 1500) ilahlekelwa kakhulu ukugibela isivinini kuze kube yilapho usufika off the hook. Ngiyakwazi ukukhuphuka ngokwenza amazinga amaningi aphakathi nendawo ukumenza abuyiselwe isivinini.
On FSX, nge-B737-800 anginankinga, nge-V / S = 1500 indiza ikhuphuka ngokuqinile ifike ku-31000 ft.
Uma umuntu engangitshela lokho engikwenzayo okungalungile, izosindisa ucwaningo oludlulayo isikhathi.
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: I-Vavanou 28, UCaptain123
unyaka 1 11 edlule - unyaka 1 11 edlule #927 by DRCW
Ama-737 amadala awazange abe namandla okwenza i-737-800. Uma uya kufayela le-CFG yendiza yakho, uyivule bese upheqela esigabeni se- [Enjini], kukhona umugqa wekhodi ekhonjiwe .... Angisebenzisi lo moya kodwa ake sithi ukushuba kukhombisa i-18929, engeza cishe amaphawundi we-4000 ngaphezulu we-thrust ngakho-ke ifunda i-22929. Lokho kufanele kuvume ukushaya umoya ku-1800 fpm Nasi isibonelo noma isigaba ongasifuna:
Ukuhlela kokugcina: Unyaka we-1 izinyanga ezingu-11 ezedlule DRCW.
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: CL38
unyaka 1 11 edlule #956 by CL38
Siyabonga ngempendulo; Ngihlolwe i-28000 futhi kulungile.
unyaka 1 11 edlule #958 by DRCW
Ayikho inkinga, ukuthutha okujabulisayo!
Isikhathi ukudala page: 0.213 imizuzwana